မူဝါဒမော်ကွန်းတိုက် - စာမျက်နှာ ၂ မှ ၉ - Teles Relay
ဘီနင်နိုင်ငံတွင် coronavirus သည်အသားအရောင်ခွဲခြားမှုနှစ်ခုကိုဖြစ်စေခဲ့သည် - Jeune Afrique
Deux personnes ont été tuées depuis lundi au Bénin dans des affrontements liés au coronavirus. L’unaété mortellement touché par balles lors d’échauffourées à l’université, mardi. Un autreaété tué par un…
Sahel တွင်ပြင်သစ်စစ်တပ်သည် coronavirus - Jeune Afrique အားဆန့်ကျင်။ စစ်ဆင်နွှဲသည်
Tele RELAY တစ်ခု 26 ပင်လယ်, 2020 0
Des soldats français de l’opération Barkhane au Mali, en décembre 2019. © Fred Marie/Art In All Of Us/Corbis via Getty Images Alors que la...
တူနီးရှား - Nidaa Tounes ဟာသူမပြန်လာမယ့်ကြီးမားတဲ့ Jeune Afrique ကိုပြင်ဆင်နေသည်
Ridha Belhaj, ancien ministre directeur du cabinet de Béji Caïd Essebsi, ici en 2015. © Ons Abid pour JA La majorité des membres fondateurs...
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦး သိန်းစိန်သေဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်သောကောလာဟလများကိုအစိုးရမှတုန့်ပြန်
Le gouvernement à travers un communiqué de son porte-parole René Sadiaapporté un démenti formel aux informations qui circulent sur les réseaux depuis le 25 mars 2020, annonçant « la mort » du président de la République, Paul Biya.…
Marcel Niat Njifenji သည်အထက်လွှတ်တော်သို့တောက်ပစွာပြန်လာခဲ့သည်။
Marcel Niat Njifendjiaété réélu ce 26 mars 2020 au terme de la plénière consacrée à l’élection du bureau définitif du sénat. Marcel Niat Njifenji (c) Droits réservés …
တူနီးရှားရှိ Coronavirus: Fakhfakh နှင့် Ghannouchi၊ - လူငယ်အာဖရိက
La volonté du chef du gouvernement de recourir aux décrets-lois, durant deux mois, pour tenter d’enrayer la propagation de la pandémie de Covid-19, est vécue comme une offensive de l’exécutif sur législatif…
ဂီနီ - သေစေလောက်သောတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားပြီးနောက်Nzérékoréတွင်မငြိမ်မသက်ငြိမ်သက်မှု - Jeune Afrique
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်Nzérékoréရှိလမ်းတစ်ခု (မော်ကွန်းတိုက် / ပုံဥပမာ) ။ © Creative Commons / Wikimedia / Maarten van der Bent နှစ်ဆဆန္ဒခံယူပွဲ...
ဘူရွန်ဒီရှိသမ္မတရွေးကောက်ပွဲ: coronavirus ၏အရိပ်၌ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကို ဦး တည်နေသလား။ - လူငယ် ...
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများအားလုံးသည် coronavirus ကူးစက်မှုကိုကြေငြာခဲ့ပြီးအချို့အတွက်မူသူတို့၏နယ်နိမိတ်ကိုပိတ်ပစ်ခဲ့သော်လည်းဘူရွန်ဒီတွင်မည်သည့်လူနာမှမတွေ့ရှိခဲ့ပါ။ အဲန်ဂျီအိုများနှင့်အတိုက်အခံဘက်မှအချို့ကစိုးရိမ်ကြသည်။
[Tribune] Coronavirus က Donald Trump ကိုဖြိုချလိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ - လူငယ်အာဖရိက
En provoquant une crise économique et en remettant le système de santé américain au centre de la campagne, la pandémie de coronavirus pourrait entraîner la défaite du président américain à la présidentielle…
Cameroon ရှိ Coronavirus: အင်္ဂလိပ်စကားပြောသောဒေသတွင်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆီသို့ ဦး တည်နေသလား။ - လူငယ်အာဖရိက
Les Forces de défense du Cameroun du Sud (Socadef), groupe armé ambazonien, ont accepté mercredi 25 mars de s’associer au cessez-le-feu réclamé par les Nations unies en raison de l’épidémie de coronavirus…
လွန်ခဲ့သော 12345 ... 142 လာမယ့်